China aluminium CNC agbanye mmiri Manufacturer na Supplier | Walley
CNC agbanye Parts ：
Ngwunye anyị nke CNC na-eme ka ọsọ ọsọ dị elu na ntụgharị dị elu nke plastik na ọla. Usoro ntụgharị na-enye ohere maka geometries ndị dị mgbagwoju anya na oghere dị n'ime ime. Anyị mbịne ike dị maka onye-offs site na ogbe mmepụta nke gị mmiri. Ọzọkwa gbanye-egwe ọka onyinye igwe na ngwá ọrụ ụlọ elu na elu arụmọrụ.
Uru nke uzo-igwe igwe
(1) Mkpebi ngwaahịa n'ichepụta usoro yinye ma melite mmepụta arụmọrụ. Ntugharị na igwe ndozi nwere ike mezue ma ọ bụ ọtụtụ usoro nhazi ahụ n'otu oge, si otú a na-ebelata usoro usoro ngwaahịa. Thiszọ a, n'otu aka, oge mmepụta oge nke mgbanwe nke kaadị echichi na-ebelata, a na-ebelata usoro nrụpụta na oge ichere nke ngwa ọrụ, nke nwere ike meziwanye arụmọrụ mmepụta.
(2) Belata ọnụ ọgụgụ nke clamping ma melite nhazi ziri ezi. Mbelata nke nọmba kaadị na-ezere na-ezere nchịkọta nke njehie n'ihi ntụgharị nke akara akara aha. N'otu oge ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị na-agbanwe igwe na-arụ ọrụ nwere arụmọrụ nke nchọpụta n'ịntanetị, nke nwere ike ịghọta nchoputa ọnọdụ na nkenke njikwa data dị mkpa na usoro nrụpụta, si otú a na-emezi nhazi nke ngwaahịa a.
(3) Belata ala oghere na mmepụta ihe. Ọ bụ ezie na ọnụahịa nke otu ngwongwo na-agbanwe igwe na-arụ ọrụ dị oke elu, n'ihi mkpụmkpụ nke usoro mmepụta ihe na mbelata akụrụngwa achọrọ maka ngwaahịa, yana mbelata ọnụ ọgụgụ nke ihe ndozi, mpaghara ogbako na akụrụngwa mmezi akwụ ụgwọ, ọ nwere ike n'ụzọ dị irè belata n'ozuzu ofu akụ na-eri nke ego, mmepụta ọrụ na management. “
CNC machining mbịne akụkụ
MAX cnc machining OD na 300X300mm
Roughness nke elu: Ra≤0.1μm
Nkenke: +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Dị nhazi: PDF, JPEG, AI, PSD
Min ndidi akara na +/- 0.01mm.
Usoro: Nhazi nke ndị ọzọ, Usoro ndị ọzọ na-agụnye akara stampụ na-ekpo ọkụ, mpịakọta mkpakọ
Ngwaahịa aha CNC machining mbịne Parts
Nha Ngwaahia nha
Nkenke +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Ngwa n'ihi na ịwa ahụ nkpuchi igwe
Asambodo ISO9001: 2008 ， IATF16949, ROHS
Ihe Ike Aluminom, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla kọpa, ọla ndị siri ike, ọla dị oke ọnụ, igwe anaghị agba nchara, Alloys Steel
.Dị Broaching, Drilling, Etching / Chemical machining, Laser machining, igwe, Ndị ọzọ machining Services, Rapid Prototyping, agbanye, Waya EDM
Akpụzi Ọdịdị Na-aga n'ihu
1) videonye vidiyo na foto na nkọwa kpam kpam n'oge mmepụta.
2) Promịpụta dị ka izi ezi nke eserese, nzukọ mmesho ịchọpụta ọrụ na nlezianya àgwà akara iji hụ na 0 laghachi ọnụego
3) Iwu 99% nwere ike ijide n'aka na nnyefe oge
4) Ihe ndi anyi ji eme ihe kacha mma
5) 24 awa ọrụ ntanetị
6) The mpi ụlọ ọrụ mmepụta ihe price na otu àgwà na ọrụ
7) Usoro kachasị mma maka ngwaahịa dị iche iche.
Nke gara aga: EDM Ngwa Ngwa
Osote: Aluminium CNC igwe Parts
Aluminium CNC agbanye Parts
Aluminium CNC agbanye Sleeve
Cnc Aluminom gbanwere Nkebi
CNC Aluminium agbanye Parts
CNC agbanye Aluminium Nkebi